जीवन बीमा कम्पनीमध्ये कुन अब्बल कुन कमजोर ?* – somai Insurance Group
जीवन बीमा कम्पनीमध्ये कुन अब्बल कुन कमजोर ?*
चालू आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत आठ बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । कम्पनीहरुको नाफा गत बर्षको यसै अवधिको तुलनामा २५.३१ प्रतिशतले बढेको हो ।गत आर्थिक बर्षको चैत्रसम्म ८ जीवन बीमा कम्पनीले ८७ करोड खुद नाफा कमाएका थिए ।
नेप्सेमा सूचीकृत आठ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४३ करोड ५८ लाख नाफा कमाएको छ । सबैभन्दा कम सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले एक करोड ४७ लाख कमाएको छ ।
तर गत बर्षको तुलनामा भने सबैभन्दा धेरै नाफा बीमा संस्थानको १२२ प्रतिशतले बढेको छ ।सबैभन्दा कम नेपाल लाइफको ६.३७ प्रतिशतले बढेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले शतप्रतिशत नाफा बढाउदा अन्य कम्पनीले १२ देखि ६२ प्रतिशतसम्म नाफा बढाएका छन् ।
तेस्रो त्रैमाससम्ममा आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफले मात्र बीमा समितिले तोकेको चूक्ता पूँजी पुर्याएको छ । बीमा समितिले ०७५ असारसम्म जीवन बीमा कम्पनीलाई चूक्ता पूँजी दुई अर्ब कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल लाइफको सबैभन्दा धेरै चार अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । जसको जगेडा कोषमा समेत तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । चूक्ता पूँजी र जगेडा कोषको आधारमा नेपाल लाइफ सबैभन्दा बलियो कम्पनी देखिएको छ । आठ कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सबैभन्दा कम १८ करोड मात्रै चूक्ता पूँजी छ । त्यस्तै जगेडा कोषको आकार पनि संस्थानको सबैभन्दा कमजोर १६ करोड मात्रै रहेको छ ।
जीवन बीमा कोष र प्रिमियम संकलनमा पनि नेपाल लाइफले सबै कम्पनीलाई पछि पारेको छ । ४७ अर्ब ६८ करोडको बीमा कोष रहेको कम्पनीले चैत्रसम्ममा दश अर्ब ७० करोड खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । आठ कम्पनीमध्ये सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा कोष सबैभन्दा कमोजर देखिएको छ । जसको बीमा कोषमा ३ अर्ब २३ करोड मात्र छ ।
खुद बीमा शुल्क आर्जनमा सबैभन्दा पछि परेको गुराँस लाइफले ८९ करोड मात्र प्रिमियम संकलन गरेको छ । आठ बीमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा कुल रकम एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । चैत्रसम्म यी कम्पनीले २९ अर्ब खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको नौ महिनासम्मको अपरिष्कृत तथ्याङ्क केलाउदा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै १७ रुपैयाँ ८२ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी देखिन्छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल लाइफको १३ रुपैयाँ १८ पैसा र सबैभन्दा कम एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ३ रुपैयाँ ६६ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी कायम भएको छ । बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी बढाउने दबावले पूँजी बढ्दा अधिकांश कम्पनीले प्रतिसेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न सकेका छैनन् ।
शेयरमूल्यका आधारमा सबैभन्दा महङ्गाे कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेको छ । जसको प्रतिसेयर मूल्य पाँच हजार एक सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम प्राइम लाइफको ६९२ रुपैयाँ छ । मुल्य आम्दानी अनुपात र नेटवर्थ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । सबैभन्दा कम मुल्य आम्दानी अनुपात सूर्या लाइफको र सबैभन्दा कम नेटवर्थ एशियन लार्इफको देखिएको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत आठ बीमा कम्पनीहरुमध्ये विभिन्न दश सूचांकका आधारमा सबैभन्दा अब्बल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स देखिएको छ । नेपाल लाइफ चुक्ता पूँजी, जगेडा कोष, खुद नाफा, बीमा कोष र प्रिमियम संकलनमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । तर नाफाको वृद्धिदरमा भने नेपाल लाइफ सबैभन्दा पछि परेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको खुदनाफा वृद्धिदर, शेयरमूल्य, प्रतिसेयर आम्दानी अनुपात र नेटवर्थ सबैभन्दा धेरै छ । तर चुक्ता पूँजी, जगेडा कोष र नाफामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रतिसेयर आम्दानीको आधारमा भने नेशनल लाइफ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
Newer बिमा क्षेत्रमा व्यवसायिक अभिकर्ताको अभाब
Older नेपाल लाइफको खुद बीमा शुल्क ३७ प्रतिशतले बढ्यो